sawehlor: March 2012
iAbidan(အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်) v1.1 for iPhone/Pad/Pod touch
iPhone/Pad/Pod touch အသုံးပြုသူတွေအတွက် iAdidan (အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်) version အသစ် 1.1 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 13:36 1 comments
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ ကျွန်တော်တို့ Screen Shot ရိုက်တဲ့ Software လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လည်းလက်ရှိ ဒီကောင်လေးကို ပဲအသုံးပြုနေပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software လေးတွေ Update ဖြစ်လာတာနဲ့ အမျှ ပါဝင်လာတဲ့ Features လေးတွေပိုပြီးစုံလင်လာတာ ကိုတွေ့ရမှာပါ။ အထဲမှာ .Reg ဖိုင်လေးနဲ့ Registry လုပ်ရန်အတွက် ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Double-Click ပေးပြီး Run ပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ အသုံးပြုပုံကိုတော့ ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ ရှင်းပြပေးပါ့ မယ်။ အောက်မှာ ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။ ကျွန်တော် နှစ်ချက်တော့ပြပါ မယ် ပုံလေးမှာကြည့်ပေးပါ။
Posted by saw ehlor at 20:060comments
HTML အခြေခံလေ့လာချင်သူတွေ အတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီ flash Video လေးကို မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် မှရယူပြီး Share ပေးလိုက်ပါတယ်။ RAR နှင့် ifile.it ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးဒေါင်းလုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ကျးဇူးတင်ပါသည်။
Posted by saw ehlor at 14:040comments
ဒီဆော့ဝဲလေးကို ကျနော် ကိုနေမင်းမောင်ဆီကယူထားတာပါ ပြန်ပြီး share ပေးလိုက်ပါတယ်။ Crack file လေးနဲ့အမြဲသုံးလို့ရပါတယ်။ update တော့မလုပ်နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ..
ကျနော်တို့ နေ့စဉ်သုံးစွဲနေတဲ့ ကွန်ပျူတာက အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ ဟက်ဒစ်လေးကို အမြဲစစ်
ဆေးပေးနေဖို့တော့လိုပါတယ်..တခါတလေ ဟက်ဒစ်က heat တွေ အရမ်းတက်နေတာတွေ ရှိရင်
ဒီတိုင်းဆို ကျနော်တို့ မသိနိုင်ဘူးလေ..ဒီကောင်လေးကို ရမ်းထားရင် ကျနော်တို့ ဟက်ဒစ်လေးအကြောင်း
ကို လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်ပါတယ်..သူ့မှာ အော်တို alert လဲပါပါတယ်..တခုခုဆို သူက အချက်ပေးပါလေ့
မယ်..ဒါဆိုရင် ကျနော်တို့ စက်ပိတ်ပြီးနားတာတို့ စက်ကို အနားပေးလိုက်ရင် ဟက်ဒစ် ပျက်နိုင်လောက်တဲ့
အဖြစ်ကနေ ရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်..သူက ကို့စက်မှာတက်ထားတဲ့ HDD ရဲ့ Health ကိုအမြဲ ပြနေမှာဖြစ်ပါ
တယ်..ဒိကောင်လေးနဲ့ ကျနော်တို့ ဟက်ဒစ်ပျက်နိုင်တဲ့ ဘေးကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေ့မယ်..
အပေါ်မှာလဲ ပုံလေးနဲ့ ပြသထားပါတယ်..အဆင်ပြေပါစေ.
Posted by saw ehlor at 11:220comments
ဒီ software ကတော့ ipad, iphone, ipod တွေထဲမှာရှိတဲ့ video, music, photo တွေအားလုံးကို မိမိကွန်ပျူတာထဲကို transfer လုပ်တဲ့ software ပါ. သုံးရတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ipad, iphone, ipod တွေထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကွန်ပျူတာထဲကို copy ကူးချင်တဲ့သူများ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 16:140comments
ဒါကတော့ kaspersky internet security (KIS) နောက်ဆုံးထွက် version ပါ. လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ် . ဖိုင်ဆိုက်က သိပ်မကြီးပါဘူး. တောင်းတဲ့သူများလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . key ကတော့ ဘယ်လို ထည့်ရတယ်ဆိုတာကို ရေးထားပေးပြီးသားပါ။ ထည့်တတ် မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . ဆိုက်ရဲ့ ညာဖက်အခြမ်းမှာ kaspersky keys တွေကို အမြဲတမ်း up to date တင်ပေးနေပါတယ် . version အားလုံးအတွက်ပါ။
Download mirrorcreator | Megaupload | Mediafire | Zshare | Ziddu | up4vn
Posted by saw ehlor at 15:270comments
Step 1:Fixed Memory Cache in Firefox
Posted by saw ehlor at 01:430comments
ဘာပဲပြောပြော အမေက အမေပါပဲ။
Samsung Galaxy S/S2 အမျိုးအစားဖုန်းတွေနဲ့ Galaxy Tab Tablet တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်မြင်ရအောင်လုပ်နည်း
Samsung Galaxy Series ဖုန်းတွေနဲ့ Galaxy Tab Tablet တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာဖောင့် မြင်ရတဲ့ application လေးပါ။ Galaxy S နဲ့ Galaxy S2 တွေမှာသွင်းလို့ရပါတယ်။ သွင်းပုံသွင်းနည်းကိုပါပြောပြပါမယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ ဖိုင်နှစ်ခုလုံးကို download လုပ်ပါ။
zawgyi font application အားရယူရန်
ဖုန်းရဲ့ settings> applications ထဲကိုသွားပြီး unknown sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ ပြီးရင်ခုနက download လုပ်ထားတဲ့ application နှစ်ခုစလုံးကို install လုပ်လိုက်ပါ။ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် ဖုန်းရဲ့ Setting > Display > Font ထဲကိုသွားပါ။ အဲဒီမှာ ခုနသွင်းထားတဲ့ zawgyi font ကို font list
ထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ font list ထဲက zawgyi font ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် Samsumg Galaxy Series ဖုန်းတွေမှာ root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာလိုမြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဇော်ဂျီ ဖောင့် အပြင် တခြားဖောင့်တွေကိုလည်း ထပ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Fontomizer application ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ A to Z အထိ font နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ font တွေကို direct download လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဇော်ဂျီ font ကိုတောင် အဲဒီထဲကနေ download လုပ်လို့ရပါတယ်။
Posted by saw ehlor at 22:230comments
Labels: Samsung Galaxy S/S2/ Tab Tablet တွေမှာ root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်မြင်ရအောင်လုပ်နည်း
Posted by saw ehlor at 11:410comments
Posted by saw ehlor at 01:000comments
Posted by saw ehlor at 00:51 1 comments
ဘယ်သူကနေ ဘယ်သူ့ကိုစပြီးတဂ်လိုက်သလဲတော့မသိပါဘူး ။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဘလော့ဂ်ဂါ ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မန္တလေးသားလေး ကိုကိုးအိမ်က တဂ်လိုက်ပြန်ပါပြီ ။ ပြန်ရေးတာ နောက်ကျသွားတဲ့ အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါ ညီရေ ။ အရင်ဆုံးပြောချင်တာတာတွေကို အပိုင်းလေးတွေခွဲပြီး ရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
၁ ။ ဘလော့ဂ်ဂါဆိုတာ ကိုယ်ပိုင် blogspot.com ရှိယုံနဲ့ တကယ်ပဲ စာရေးသူ ဘလော့ဂ်ဂါ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီ တဲ့လား ?
၂ ။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ဘာတွေနဲ့ပြည့်စုံရမလဲ ?
၃ ။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေရှောင်ရမလဲ ?
၄ ။ အဆိပ်ပင်တွေ ရေမလောင်းကြပါနဲ့
၅ ။ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုဟာ ဘလော့ဂ် မှာ ဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးသလဲ ?
Posted by saw ehlor at 23:160comments
ဒီတစ်ခေါက်တော့ iTunes မှာ မြန်မာလို ပေါ်အောင် လုပ်နည်းလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်….
သာမာန်အားဖြင့် Windows OS ပေါ်မှာ iTunes က မြန်မာစာ မပေါ်ပါဘူး… အလေးထောင့်တုန်း တွေပဲပေါ်တာပါ။
မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ သီးချင်းနာမည်တွေကို ဖတ်လို့ ရနိင်အောင်လို့step by step လုပ်နည်းလေး တင်ပြသွားပါမယ်……
Posted by saw ehlor at 11:550comments
Posted by saw ehlor at 11:060comments
Posted by saw ehlor at 10:100comments
ကျွန်တော်တို့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ဒီ Tools လေးတစ်ခု တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကလစ်တစ်ချက်နဲ့တင်ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျက်နှာက အမဲစက် တွေ အချိုင့်တွေ နဲ့ တခြား မျက်ကွင်းညိုတာကအစ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ မျက်တောင်အတုထည့်ပေးတာက အစ ပါဝင်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ 13.9 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ဗျာ။
Posted by saw ehlor at 10:050comments
Posted by saw ehlor at 01:450comments
FileSize : 71.96 MB
Posted by saw ehlor at 21:280comments
အားလုံးပဲအဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ .။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by saw ehlor at 21:170comments
သူ့ရဲ့ Features လေးတွေကတော့ ...................
Peak computer performance အတွက် defrag and optimize disks တွေကို လျှင်မြန်စွာ clean လုပ်ပေးနိုင်တဲ့fast defragmentation tool တစ်ခုပါ…ကြေငြာတာတော့ မဟုတ်ဘူးနော် … တော်တော်ကိုမြန်တာ ကြိုက်လို့ တင်ပေးလိုက်တာ …
Disk SpeedUp ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ OS တွေကတော့ Win 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Windows7operating systems.
Labels: Disk SpeedUp
Posted by saw ehlor at 16:180comments
Posted by saw ehlor at 13:380comments
Adrosoft AD Audio Recorder 2.0 | 1.4 MB
Posted by saw ehlor at 13:220comments
Labels: Audio Recorder
ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ Network ရှိတဲ့ ကွန်ပျူ တာ တော်တော်များများကို ဗိုင်းရပ်စ်တစ်မျိုး ကူးစက်နေတယ်။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်က ကူးစက်မြန်သလို။ တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း သေးငယ်တယ်လို့ ပြောရင်လဲ ရပါတယ်။ အဓိက လုပ်ဆောင်တာက အသံကို ပိတ်ဖြစ်တာပါ။ Windows Audio ကို Disable လုပ်ပစ်တာပါ။
Posted by saw ehlor at 15:060comments
Computer Hardware အကြောင်းကို မြန်မာလိုရှင်းပြထားတဲ့
Micromedia projector လေးဖြစ်ပါတယ်
အခန်းလိုက် Computer Hardware Device အစိတ်အပိုင်းများ၊
တည်ဆောက်ပုံများ၊တပ်ဆင်ပုံများကို မြန်မာသံ မြန်မာစာလေးတွေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်
Micromedia projectorနဲ့တည်ဆောက်သွားပုံကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်
ဆရာဇော်လင်း ဦးစီးပြီးတော့ Youth ကုမ္ပဏီ ဖန်တီးထားပါတယ်
Reference : ကဗျာစမ်းရေ
Posted by saw ehlor at 14:230comments
ဒီနေ့ ပိုက်ဆံလေးစုမိတုန်း Dell studio notebook လေးသွားဝယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်
အကူအညီတောင်းပြီးသွားဖို့လုပ်တော့ သူငယ်ချင်းက ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုယူအုံးမယ်
ဆိုပြီး TFTTEST ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲကို USB Drive လေးနဲ့ထည့်ခဲ့တယ်..ဟိုရောက်တော့
notebook လည်းရပြီးတော့ Flash screen လေးကိုစစ်တဲ့အခါ ဒီဆော့လ်ဝဲလေးကအသုံးဝင်တာကို
တွေ့ရတယ် ဆော့ဝဲလေးက portable လေးပါ screen မှာအစက်အပြောက်တွေပေါ်မပေါ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
color တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ကြည့်နိုင်တဲ့ဆော့လ်ဝဲလေးပါ အစက်အပြောက်တွေမရှိဘူး Complete
ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ screen view အတွက်စိတ်ချသွားရပြီပေါ့
ကဲကြွားလုံးထုတ် လေများတာများပြီထင်တယ် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်
Posted by saw ehlor at 13:500comments
Labels: TFTTEST for to check screen
Angry.Birds.Seasons.v1.5.1 >>> 26.6Mb
မေးလ်ကနေတောင်းဆိုလာတဲ့သူအတော်များလာလို့ ပါ။ Angry.Birds စီးရီးရဲ့ဗားရှင်းအသစ်ပါ
ခရက်ဖိုင်ဖြေပြီးနောက်ထပ်ရီဂျစ်စတာကီးတောင်းလာရင် komyat ဆိုပြီးရိုက်ထဲပေးလိုက်ပါ။
လည်စေရန်အတွက်ရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်.ဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်ရန် ပုံလေးတွေနဲ့ အကြမ်းဖျင်းတင်ပြပေးပါမယ်.
၁. http://www.blogger.com ကိုဝင်လိုက်ပါ.
၂. မိမိအသုံးပြုမည့် Gmail အကောင့်ဖြင့်ဝင်ပါ.
How to Fix Explorer.exe Problem When Taskbar Disappears
ဒီနည်းလမ်းလေးကတော့ ကျနော့မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတယောက်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့တဲ့ ပြဿနာလေးပါ. ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ သူ့ ရဲ့ laptop ကို တစ်နေကုန်အသုံးပြုနေပြီး ပါဝါကိုအရင်မ ပိတ်မိဘဲ laptop battery charger ကြိုးကို တစ်ခါထဲပိတ်လိုက်မိလို့စက်ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ desktop ကြီးတစ်ခု လုံးပျောက်နေပြီး.ဘာမှလဲနှိမ့်လို့ မရ ကာလာအမဲကြီးဘဲပေါ်နေပြီး taskbar နှင့် start menu တွေ ဘာမှမပေါ်တော့ တဲ့အ တွက် တခြားမိတ်ဆွေများလဲ အခုလို ဘယ်ကနေဘာ စလုပ်ရမှန်း မသိတဲ့ ပြဿနာမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ဖြေရှင်းလို့ ရအောင် ဒီပို့ စ်လေးကို ရေးသား လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီလိုပြဿနာမျိုးကကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်လို့ဆိုင်သွားပို့ မယ်ဆိုရင်တော့ ရိုက်စား ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ခံရပြီသာမှတ်တော့ဘဲ။ သူတို့ ပြောတာကလွဲပြီး ဘာများတက်နိုင်အုံးမှာလဲ.ပြန်ရောင်းမယ် ဆို ရင်လဲ အဟောင်းဈေးနဲ့ အနှိမ်ခံရအုံးမယ်.ဆိုတော့ ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ ဘဲဖြေရှင်းလိုက်ကြပါ.စိတ်ရှုပ်ငွေကုန် စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
အဆင့်( ၁ ) Ctrl+Shift+Esc (သို့ ) Ctrl+Alt+Delete key ကိုတွဲနှိပ်ပြီး task manager ကိုခေါ်ပါ။
အဆင့်( ၂ ) task manager ပေါ်လာရင် File \_ New Task (run...) ကိုသွားပြီး ဘောက်စ်ထဲမှာ c:\_windows ကိုရိုက်ထည့်ပြီး OK ပေးလိုက်ပါ။ အောက်ပုံ...
Posted by saw ehlor at 13:300comments
All_to_pdf_7.7_portable.rar (7 MB)
ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ မိတ်ဆွေများဆောင်ထားသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ. မိမိစက်ထဲမှာ Adobe Acrobat, Acrobat Reader တစ်ခုခုရှိနေရုံနဲ့ မိမိတို့ ဖတ်ချင်တဲ့ PDF အမျိုးအစားမဟုတ်တဲ့ format တွေကို PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်. အသုံးပြုရတာလဲအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်.မိမိ PDF ပြောင်းလဲ ပြုလုပ်ချင် တဲ့ ဖိုင်..ဥပမာ...documents, such as pdf, doc, docx, docm, xls, xlsx, xlsm, ppt, pptx, pptm, rtf, txt, html, htm, url စတဲ့ format ( 3000 ) ကျော်ရဲ့ မိမိ ပြောင်းချင်တဲ့ format ကို ထည့်ပြီး ဆော့ ဝဲလ်လေးရဲ့MENU BAR မှာ ရှိတဲ့ Convert ကို Click တစ်ချက် ပေးလိုက်လိုက်ရုံ နှင့် PDF ဖိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။jpg, jpeg, bmp, gif, tif, wmf, emf စတဲ့ photo format များကိုလည်း PDF အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသေးတယ်.
အသုံးပြုချင်တဲ့မိတ်ဆွေများ အောက်မှာ download ယူနိုင်ပါတယ်...
Posted by saw ehlor at 00:530comments
Posted by saw ehlor at 16:380comments
Labels: Hardware ပိုင်းများကိုတစ်နေရာတည်းမှာ လေ့လာနိုင်ရန်
Posted by saw ehlor at 04:040comments
မြန်မာလို ထွက်ရှိပြီးတဲ့ AutoCAD စာအုပ်လေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။
Auto CAD (2002)
Posted by saw ehlor at 03:520comments
software တွေကို License version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းများ - ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
Posted by saw ehlor at 11:332comments
Labels: software တွေကို License version ဖြစ်အောင် လုပ်နည်းများ